Afaan barsiisuun akkanatti kunoo!! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosAfaan barsiisuun akkanatti kunoo!!
Afaan barsiisuun akkanatti kunoo!!
Lesson 1 Alphabet : Learn Afaan Oromoo Through English
“ኦሮሚያ፣ የአብይ የግል ጓሮው (his backyard) ሆኗል” የምንለው፣ ያለምክንያት አይደለም።
“Magaala Jimmaattis Qeerroo adamsanii ukkamsuun itti fufeera galgala kana Anuwaar Xahaa qabanii ukkaamsuufi mana dhaqanii sakatta’anii dhabanii achuma marsanii eegaaruun.”
Habashootaf Dimookiraasiin du’a. Walqixxummaan, gadaantummaadha.
Warri kun seenaa kijibaa “Feta negasti fi Kibra negasti” irraa barataniin biyyaa kanatti akka sanyii addatti ofi ilaaluu. Sanyii filatamoo nugusa salamoon/suleeymaan irraa dhufne jedhanii yaaduu. Warri Habashoota kun akkuma gooftaa suleeymaan beekumsa addaa fi dandeettii adda waaqni nuu kennee jira jedhanii amanu.
Kanaaf biyyaa kana beekumsa fi dandeettii qabnu kanaan bulchuu kan danda’u, hayyama illee kan qabu nu qofa jedhu.
Saba fi sablammoota kamiifuu beekamtii kennuu hin barbaadan. Saba fi sablammootni biroo gabroota keenyaa jedhu. Nu tajaajiluuf gara biyyaa kana dhufan malee waan biroof miti jedhu. Akka garbaatti itti fayyadamaa ture, ammas akkuma durii itti fayyadamuu qabna jedhanii abjootu. Gabra godhanii gabaa baasanii gurguraa turanis. Lafaa fi qabeenyii saboonni biroo qaban hundi keenyaa jedhu. Gaaffiin isaan Finfinnee irraa qabanis asumaa madda. Biyyaa biraa irraa nu tajaajiluuf jecha gara biyya kana ergaa dhufanii boodaa wareeranii lafa keenya qabatan jedhu.
Kabaja yeroo abbota keenya qabnu san deebifachuu qabna jedhaanii yaaduu. Akkuma yeroo abbaa lafaa ture san, saboonni biyyaa kana lafa isaanii irra jiraachuu malee abbummaa hin qaban jedhu. Kanaaf biyyaa bulchuuf mirga hin qaban jedhu.
Garuu saba fi sablammoota keesaa abjuu isaanii galmaan nama gahuuf yoo argatan, akka isaanii tolutti bixxilani tolchuun itti fayyadamu. Deebisanii ittiin saba san cabsu. Daandii isaanii irraa yoo maqe baasanii gatu.
Kanaaf walqixxummaan isaanii gadaantummaadha. Dimookiraasiin isaaniif summiidha. Warri walqixxummaa fi dimokraasii fiduuf qabsaayuu isaaniif diinaa.
Nama yaadaa faallaa isaanii qabu, waliin mari’atanii furmaata hin barbadan. Nama ciminaan Kaayyoo fi karoora isaanii fuldura dhaabatu sakaallaanii kuffisu, shiraan balleessuu, fannisanii ajjeesuu. Sana booda kaayyoo fi karoora isaanii mormii malee moosisu. Haala kanaan qabsaawota heddu nyaatan
Biyyaa tana keessatti ummata kana waliin dimookiraasii fiduuf ifaajuun aarsaa guddaa gaafata.
Carraa sadi qofatu natti muldhata
1. Yaada boodatti hafa kana ifaan irratti duulanii ajjeesuun akka boolla hin kaaneetti awwaaluu
2. Biyya garagaraa ijaarachuu
3. Shiraa fi xaxaa siyaasaa isaanin sakaallaamanii hiyyummaa fi gadadoo keessaa jiraachu.
The latest political situation in the Somali region is very disconcerting,